Aqoonsiga sirdoonka ee nambarka xirmooyinka logistics | Raadinta sirdoonka ee xirmooyinka saadka | Aqoonsiga garaadka ee magaca shirkadda saadka | AI.17CKD.COM
Soo hel boggaga u heellan shirkadaha kale ee loojistikada loogu talagalay raadraaca xirmada. >>
Kaliya waxaad raadin kartaa oo raadin kartaa ugu badnaan 100 xirmooyinka logistics markiiba, waxaadna gali kartaa oo kaliya hal lambar xirmo khadkiiba.Haddii tirada guud ay dhaafto 100, nidaamku wuxuu si otomaatig ah u iska indha tirayaa xirmooyinka saadka ee dhaafay xadka tirada.
「 Nidaamku wuxuu la socon doonaa tirada guud ee xirmooyinka saadka la baaray: 0 」
Dhammaan xulashooyinka Ma heli karo macluumaadka raadraaca ee xirmada Weli wadada loojistikada ... Xirmada waxaa la geeyay meeshii loogu talagalay! Xirmada waxaa dib loogu celiyey barta ay ka bilaabaneyso gaadiidka saadka! Xirmada waxaa qabtay kastamka oo xiray oo baaray! Noocyada kale ee cilladaha aan caadiga ahayn!
Nidaamku wuxuu ogaaday oo cadeeyay 0 xeerar lambarro xirmo ah, fadlan xulo magaca shirkadda saadka ee aad rabto inaad weydiiso, ka dibna riix batoonka [Bilow raad raaca].
nambarada taxan Lambarka xirmada Saadka Xaaladda Saadka Isha macluumaadka macluumaadka Waqtiga u dhigma macluumaadka dabagalka ugu dambeeyay ee saadka waqtiga bixitaanka Waqtiga gaadiidka isugeynaya Goobta adeegga iyo goobta Macluumaadkii ugu dambeeyay ee raadraaca ee xirmada saadka fiiri faahfaahinta
Dhammaan lambarrada xirmada ee uusan nidaamku aqoonsan karin.
「 Nambarka taxanaha ah ayaa lagu daray 」
「 Tirada guud ee xirmooyinka saadka ee nidaamku uusan ogaan karin oo aqoonsan karin: 0 」
↓ Buuxi ereyada muhiimka ah si aad u raadiso macluumaadka raadraaca xirmada ↓
Haddii nidaamku si guul leh uga helo ereyada muhiimka ah ee aad ka buuxisay macluumaadka raadraaca xirmada,
Midabka asalka ah ee qoraalka ereyga muhiimka ah wuxuu noqonayaa madow!
「 Tirada guud ee xirmooyinka u dhigma ereyada muhiimka ah: 0 」
↓ Buuxi waqtiga daahitaanka dhoofinta ee xirmadaada saadka ↓
Haddii waqtiga isu geynta gaadiidka saadka uu ka bato waqtiga daahida ee aad buuxiso,
Midabka asalka ah ee liisku wuxuu noqonayaa bunni!
Magaca xaaladda boostada ee xirmada waxaa loo beddeli doonaa: * Dib u dhaca gaadiidka.
Waad riixi kartaa badhanka [Ka qaad calanka daahitaanka] si aad u soo celiso midabka liiska!
「 Tirada xirmooyinka saadka ee dib udhacay: 0 」
「 Waxaad ubaahantahay inaad horey usii ogaato! 」: Kadib markaad gasho nambarka xirmada logistics, marka hore dhagsii badhanka [Aqoonsiga Caqliga], nidaamka waxaa laga yaabaa inuu aqoonsado xeerar badan oo xirmo xirmo ah, ka dibna waxaad dooraneysaa magaca shirkada logistics-ka aad rabto inaad wax ka weydiiso, ka dibna riix badhanka [Bilow raad raaca].
Markaad dooranayso magaca shirkadda saadka, fadlan doorashadaada u samee si taxaddar leh, hana u dooran si aan kala sooc lahayn si aad uga fogaato luminta waqtiga.
「 aad loogu taliyay 」: Haddii nambarada xirmooyinka saadkaaga ay ka wada tirsan yihiin isla shirkadda saadka, waxaa lagugula talinayaa inaad halkaan aado si aad uhesho websaydhka u heellan ee raadinta xirmooyinka shirkadda loo xilsaaray sahaminta: https://bt.17ckd.com/so/,
Adeegsiga habkan si aad ula socoto oo aad u raadiso xirmadaada saadka waxaa laga yaabaa inay waxtar badan leedahay!
「 Hordhac la xiriira - 1 」: Xaaladda dirista ee kaladuwan waxay u dhigantaa midabbada asalka ee kala duwan, Markaad gujiso lambarrada Carabiga, midabka miiska ayaa isbadalaya si waafaqsan.
* Ma heli karo macluumaadka raadraaca ee xirmada. -> Midabku waa caddaan,
* Weli wadada loojistikada ... -> Midabku waa oranji,
* Xirmada waxaa dib loogu celiyey barta ay ka bilaabaneyso gaadiidka saadka! -> Midabku wuxuu isu beddelaa casaan,
* Xirmada waxaa la geeyay meeshii loogu talagalay! -> Midabku wuxuu isu beddelay cagaar,
* Xirmada waxaa qabtay kastamka oo xiray oo baaray! -> purple,
* Noocyada kale ee cilladaha aan caadiga ahayn! -> buluug.
「 Hordhac la xiriira - 2 」: Markaad isticmaaleyso degelkan si aad ula socoto oo aad u raadsato xirmadaada saadka, nidaamku wuxuu sameyn doonaa hubinta amniga ee biraawsarkaaga Hubinta amniga waxay soconeysaa 6 ilbidhiqsi ilaa 10 ilbidhiqsi ...
(1) Haddii aad aragto sawirkan: " ", waxay ka dhigan tahay in nidaamku go'aaminayo in dhaqankaaga raadraaca ama aaladda IP-ga ay tahay mid laga shakiyo, ama aad furto bogag aad u tiro badan isla waqtigaas, sidaa darteed nidaamku wuxuu ka hortagayaa aaladda IP-ga inay sii waddo inay marin u hesho.
(2) Haddii aad aragto sawirkan: " ", waxay ka dhigan tahay in server-ka websaydhkan la hayo. Fadlan sug ilaa 1 daqiiqo ka hor inta aanad bogsan bogga oo mar kale isku day.
「 Hordhac la xiriira - 3 」: Kadib markii xirmada raadinta raadraaca ay dhamaato, hadii ay jiraan ugu yaraan 1 xirmo logistics oo aan heli karin macluumaadka saadka saadka, waxaad isticmaali kartaa badhanka [Raadinta qoto dheer], oo laga yaabo inaad ubaahantahay inaad sugto wakhti.
「 Caawinaad iyo tilmaamo 」: Haddii aad ka heli karto macluumaadka raadraaca xirmada adoo adeegsanaya bogga rasmiga ah ee shirkadda saadka, laakiin ma heli kartid macluumaadka raadraaca xirmada adoo adeegsanaya degelkan, waxaad ii soo diri kartaa emayl: "emmis@qq.com".
U dir emayl qaabkan qaabkan ah: "URL faahfaahsan oo ku saabsan bogga rasmiga ah ee shirkadda saadka" + "I sii nambarada raadraaca ee saddexda xirmo. (Dhammaan baakadaha si guul leh ayaa loogu geeyay qofka loogu talagalay!)".
Waxaan ula macaamili doonnaa sida ugu dhakhsaha badan! Waad ku mahadsan tahay taageeradaada iyo fahamkaaga!
「 Ogeysiisyada Sharciga 」: Websaydhkani maahan websaydhka rasmiga ah ee shirkad saadka ah kama qayb galno ganacsiga loojistikada websaydhkani waa uun barmaamij raadinta qayb ka mid ah. Haddii aad qabtid su'aalo kale oo ku saabsan xirmadaada saadka, fadlan toos ula xiriir taleefanka rasmiga ah ee shirkadda saadka.